साबुन नलगाई मज्जाले हात धुँदा पनि किन जाँदैन कोरोनाभाइरस ? यस्तो छ खास कारण
प्रत्येकपटक २० सेकेन्डसम्म हात धुनुपर्दा थाक्नुभयो ? धुँदा धुँदा तपाईंका औंला चाउरिन थाले ?
तर हात धुन नरोक्नुस् है ।
कोभिड–१९ फैलिनबाट रोक्नका लागि तपाईंले गर्ने यस्तो सानो प्रयास पनि अमूल्य हुन्छ ।
साबुन र तातोपानी अनि अल्कोहल भएका स्यानिटाइजरहरू जस्ता सामान्य कुरा परजीवीहरूमाथि कसरी हावी हुन सक्छन् ?
सीएनएनमा प्रकाशित स्यान्डी लामोत्तेको रिपोर्ट